अफलाइन मोडसँग ईमेल उत्पादकता बढाउनुहोस् मार्टेक ब्लग
मङ्गलबार, जनवरी 25, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 माइकल रेनल्ड्स
धेरै व्यक्तिहरू जसले मलाई चिन्छन् उनीहरूलाई मेरो प्रेम सम्बन्धको बारे थाहा हुन्छ इनबक्स शून्य। पहिले लोकप्रिय बनाएको मर्लिन मान, इनबक्स शून्य तपाईंको ईमेल प्रबन्धन र तपाईंको इनबक्स खाली राख्ने एक विधि हो। यो एक महान छ ईमेल उत्पादकता प्रणाली। मैले अवधारणा लिएको छु, तिनीहरूलाई डिस्टिल गरी अलि अगाडी बढेको छ, र केहि नयाँ मोड़हरु जोडेको छु। म पनि सिकाउँछु ईमेल उत्पादकता मा शैक्षिक सत्र नियमित रूपमा।
जे होस् म ठूलो प्रशंसक हुँ, सबै जना साँचो इनबक्स शून्य प्रणालीमा सबै चरणहरू अनुसरण गर्न प्रतिबद्ध छन्। म बारम्बार गाडीबाट तल झर्दछु र आफैमा ईमेल झेनको खुशीको ठाउँमा कुरा गर्नुपर्दछ।
यद्यपि यस प्रणालीबाट एउटा सरल प्रविधि छ जुन तपाईं तुरून्त र सजीलै कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ, र यसले जीवन सजिलो बनाउँदछ। यसलाई "अफलाइन मोड" भनिन्छ।
धेरै आधुनिक ईमेल प्रोग्रामहरू (जस्तै एप्पल मेल, आउटलुक, आदि) सँग एक सेटिंग हुन्छ अफलाइन मोड। जब तपाईंको ईमेल प्रोग्राम अफलाईन मोडमा सेट गरिएको हुन्छ, कुनै नयाँ मेल ल्याइने छैन र तपाईंको इनबक्स कुनै ठूलो प्राप्त हुने छैन। जब यो राज्य सक्षम गरिएको छ, तपाईं अब अनौपचारिक स्क्यान गर्न को लागी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, प्रक्रिया, र आगमन जवाफ ईमेल द्वारा विचलित महसुस बिना ईमेललाई जवाफ।
मैले पहिलो पटक उडानको बारेमा केहि बर्ष पहिले सोचेको थियो। धेरै एयरलाइन्सहरु अब उडान को लागी वाईफाई प्रदान गर्दछ तर प्राय भाग को लागी, उडान को अर्थ पूर्ण बिच्छेद भएको मतलब। म उडानमा मेरो ल्यापटप लिन्छु र मैले उडानको क्रममा म कती फलदायी भएको याद गर्न थालें। मँ धेरै र धेरै ईमेलमा जवाफ दिन सक्षम भएँ किनकि आउने सन्देशहरू द्वारा म विचलित भएको छैन। म अवतरण गरिसके पछि अनलाइन प्राप्त गर्न रमाईलो पनि भयो र सन्तोषजनक "whoosh!" messages० सन्देशहरू सबै एकैचोटमा पठाइँदै।
तपाईंको ईमेल प्रोग्राम अफलाईन मोडमा राख्नु भनेको समान अनुभव र उत्पादकत्व लाभ मात्र सिमुलेट गर्दछ तर तपाईंलाई एकै समयमा वेब र अन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिईएको बोनसको साथ।
यो साधारण परिक्षण गर्नुहोस्: तपाईको इ-मेल प्रोग्राम बन्द गर्नुभन्दा पहिले तपाईले प्रत्येक चोटि अफलाईन मोडमा सेट गर्नुहोस्। त्यसो भएपछि, जब तपाईं यसलाई अर्को पटक खोल्नुहुन्छ, अनलाईन मोडमा फिर्ता सेट गर्नु अघि जत्ति धेरै ईमेलहरू जवाफ दिन वा प्रोसेस गर्न प्रतिबद्ध गर्नुहोस्। यो एक हप्ताको लागि राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो ईमेलको राम्रो नियन्त्रण पाउन थाल्नुहुन्छ भने।
म तल तपाइँको टिप्पणीहरु सुन्न चाहन्छु!
जनवरी १, २०१ 25 १२::2011 अपराह्न
यो एक शानदार टिप हो! ईनबक्स शून्यमा पुग्न मैले कडा मेहनत गरेको छु, तर तिनीहरू आउँदैछन्! LOL मसँग अब एक सहायक छ आधारभूत ईमेल अनुरोध / प्रश्नहरूको साथ मद्दत गर्दै, तर दिनको अन्त्यमा, कोही पनि वास्तवमै तपाईंको लागि यो गर्न सक्दैन। म यसलाई एक प्रयास दिन गइरहेको छु र हेर्नुहोस् कि यसले मद्दत गर्दछ भने। धन्यबाद र महान पोस्ट श्री रेनल्ड्स।
धन्यबाद, ह्यारिसन! मलाई थाहा दिनुहोस् कि यो कसरी जान्छ 🙂
स्वत: प्राप्ति बन्द गर्दैमा मेरो नम्बर एक हो, ईमेलको साथ उत्पादकत्व बढाउन कसैको मद्दतको लागि पहिलो चरण।
यसले स्पेस आक्रमणकारीहरूको खेलबाट ईमेल फिर्ता गर्दछ (तिनीहरू आउँदछन्!) त्यागीको खेलमा (डेक हराउन तपाईंको समय लिनुहोस्।)